ओलीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन् । देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी दिन उनले पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका हुन् ।
एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव भीष्मराज अधिकारीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा एमालेको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन राखिएको जानकारी दिए ।
पत्रकार सम्मेलन दिउँसो १ बजे पार्टी कार्यालय थापाथलीमा राखिएको उनको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको गलत कामको असर कांग्रेसलाई पनि परेको दाबी गरेका छन् । काठमाडौंलगायत शहरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार आउनु ओलीको गलत क...
राप्रपा नेपालले निर्वाचन आयोगसँग चुनाव चिह्न ‘गाई’ माग्ने निर्णय गरेको छ । सोमवार भएको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगस...
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न विधिहरू प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसका ला...
बुटवल मेयरको पहिलो निर्णय- भूमिहीनलाई जतिसक्दो छिटो लालपूर्जा
बिवाईडी नेपालको ब्रान्ड एम्बेस्डर बने हरिवंश आचार्य